Ukususwa kwe-IPL kweenwele ze-IPL - i-china IPL i-laser yokususa iinwele abavelisi, abaxhasi
Ukukhanya kwe-E-OPT SHR IPL engenakususwa kweNwele kunye ne-IPL + ye-RF yokususa iinwele N9
Ukukhanya okukhulu kwe-pulsed (IPL) lunyango lwezonyango. Abantu banokuyisebenzisa ukunciphisa iimpawu zokwaluphala okanye ukususa iinwele ezingafunekiyo. Olunye usetyenziso lubandakanya ukunciphisa ukubonakala kwezikrelemnqa.
I-IPL isebenza ngendlela efanayo kunyango lwe-laser. Umahluko kukuba apho unyango lwe-laser luhambisa ubude bamandla ombane omnye, i-IPL ihambisa ii-wavelengths ezininzi.
Imisebenzi emininzi DPL SHR IPL Freckles Pigment Age Spots Removal E9C
I-OPT DPL IPL yeLaser Technique iyathandwa kunye noKhuseleko kwi-treamtnet ekususeni iinwele, ukuSusa imibimbi, ukwenza mhlophe kwesikhumba, iiPores ziyancipha, ayibuhlungu, iyasebenza kwaye iyakhawuleza ukuvela iziphumo ezonelisayo ze-Salon.
Ingcali ye-OPT ye-IPL yoKususa uLusu ekuvuseleleni ulusu N8
Ukukhanya kufunxwe yi-melanin kwiifollic zeenwele. Ngokusebenzisa isiphumo se-optical kunye ne-thermal esivelisiweyo kwaye sakhanya ekukhanyeni, ifezekisa injongo yokususa iinwele ezingalindelekanga.
Ngokusisigxina Khetha i-IPL Dpl Thermal Therapy Therapy Skin Rejuvenation Machine E9SH
I-DPL IPL SHR imele ukususwa kweenwele okuphezulu okusebenzisa itekhnoloji ephezulu kakhulu "yokuhambisa" ukwenza unyango olungenazintlungu. Iyakwazi ukukhupha i-10 shots ngomzuzu omnye owenza ukuba unyango luhanjiswe.
Umatshini woBuhle be-3 kwi-1 yokuHlaziya uLusu ekususeni i-E-Light IPL RF ND YAG yeLaser yezixhobo ze-E11B
Esimisebenzi mininzi Isaluni Isixhobo Isixhobo Elight Shr IPL RF YAG Laser Izinwele Ukususwa kunye nombala Ukususwa Icebo iyasebenza kwi ukususwa kweenwele ezisisigxina, ukususwa kweTattoo, ukususwa kwebala, ukuphakamisa ubuso.
Izibambo ezi-3 zokuPhatha ukuSebenza ngokuBanzi nge-IPL RF YAG yeLaser yeTattoo yokuSusa iiMoto zokuSusa iiNwele E6Q
Isixhobo esisebenza ngemisebenzi emininzi Ubuhle IPL / Q Tshintsha ND YAG Laser / RF Umatshini kunyango unyango Ukususwa kweenwele, Ukususwa komvambo, ukuphakamisa ubuso, uKhathalelo lolusu ..
Ephathekayo 2in1 Q-Tshintsha ND YAG Tatoo Ukususwa IPL Hair Ukususwa Laser Beutay Machine E11C
I-OPT (i-Optimal Pulse Technology) itekhnoloji esisiseko, kusetyenziswa umbono wetekhnoloji ye-3D: Amandla + obubanzi be-pulse + ukubetha kwamaza. Into ebalulekileyo kukuba yenze uphuculo olukhulu kwizixhobo zokusebenza,
I-Portable RF Wrinkle Ukususa i-IPL yokuSusa iiNwele ukuHlaziya ubuGcisa beSalon Izixhobo E9B
I-Photothermic kunye ne-photochemical action iya kuchukunyiswa yimitha ye-IPL. Kwelinye icala, i-IPL iya kukhuthaza ukuveliswa kwakhona kwe-collagen kunye nokuphinda kwenziwe kwakhona okwenza ukuba ulusu lubhetyebhetye kwaye lube lula.
Izixhobo eziSebenzayo zoBuhle bezixhobo ze-IPL zokususa iinwele Q Tshintsha i-ND YAG Umatshini wokususa iTat ye-E9SQ
Itekhnoloji ye-E-Light idibanisa ngokupheleleyo izibonelelo zamandla ombane kunye nonomathotholo. Ngumahluko wempedance kulusu kunye nobushushu bangaphambi kobushushu obuvelisiweyo xa ulusu lukhetha amandla e-optical,